Isihleli sephephabhuku esixhunywe eChinese safuna usizo lokuphikisa i-Covid-19 lab origin hypothesis - US Right to Know
Isihleli sephephabhuku esixhunywe e-China safuna usizo lokuphikisa i-Covid-19 lab origin hypothesis
Posted on April 7, 2021 by USainath Suryanarayanan
Umhleli oyinhloko wephephabhuku lesayensi elinobudlelwano neChina uthumele i- ukuhlaziya ukuphikisa inkolelo-mbono yokuthi i-coronavirus yenoveli i-SARS-CoV-2 ivela ebhodini, ngokusho kwama-imeyili atholwe yi-US Right to Know.
Ukuphawula kuqinise ukulandisa kwesayensi kokuqiniseka ngemvelaphi yemvelo ye-SARS-CoV-2, igciwane elibangela i-Covid-19, emasontweni ambalwa nje ngemuva okokuqala kubikwa ukuqubuka eWuhan, China.
Ukwamukelwa kwephephabhuku lokuphawula ukuze kushicilelwe kungakapheli amahora ayi-12 ethunyelwe kusikisela inqubo engenamqondo yokubukeza ontanga ngokushicilelwa yisayensi ukwenza iphuzu lezepolitiki.
I-commentary, ebhalwe yi-virologists yase-US, yashicilelwa ngasikhathi sinye ne Isayensi imibiko kanye a isitatimende ososayensi abangama-27 abashicilelwe emaphephabhukwini ahlukene ukuthi bonke bagomela ukuthi i-coronavirus entsha inemvelaphi yemvelo.
The isambulo ukuthi umhleli oyinhloko, uShan Lu wase-University of Massachusetts Medical School, wacela ukuphawula kwalo magazini Ama-Microbes Asakhulayo Nezifo (EMI) kuphakamisa imibuzo ngokuthi ngabe yayikhona yini ukuxhumana phakathi kwezintshisekelo zezepolitiki nezesayensi ezihambisana ne Isikhundla sikahulumeni waseChina kulokhu inempikiswano enkulu ukukhishwa.
Iphephabhuku Ukuhlela is liphathwe yiShanghai Shangyixun Cultural Communication Co eChina, ngokusebenzisana nomshicileli uTaylor & Francis, ozinze eNgilandi. Abahleli abaningi bejenali namalungu ebhodi zizinze eChina, kufaka phakathi ezinye eziphethwe nguhulumeni waseChina.
EMI Amalungu ebhodi uShibo Jiang eFudan University School of Medicine naseYuelong Shu eSun-Yat Sen University babephakathi iqembu lososayensi baseChina abafuna ukushintsha igama le-coronavirus entsha ukuyiqhelelanisa neChina; UDong Xiaoping uyisikhulu sikahulumeni eChinese Centers for Disease Control, owayengungcweti wesibili ohlangothini lwaseChina Februwari 2020 mission ngokuhlanganyela neNhlangano Yezempilo Yomhlaba ukucacisa umsuka weSARS-CoV-2.
Ukuphawula kukaFebhuwari 2020 kunesihloko esithi “Abukho ubufakazi obunokwethenjelwa obusekela izimangalo zobunjiniyela be-laboratory yakwa-SARS-CoV-2,” futhi kwabhalwa ngabadokotela bamagciwane uShan-Lu Liu noLinda Saif base-Ohio State University; USusan Weiss waseYunivesithi yasePennsylvania; noLishan Su, ngaleso sikhathi owayexhumene ne-University of North Carolina. Ababhali baphikise ku-athikili yabo bephikisana nokuthi kungenzeka ukuthi i-SARS-CoV-2 iqhamuke endaweni evuzayo yelab ye-bat coronavirus egama layo I-RaTG13 kwakuyi agciniwe ngaphakathi kweWuhan Institute of Virology (WIV) yaseChina.
I-WIV iyisikhungo sokucwaninga se-coronavirus esiphambili emhlabeni futhi itholakala amamayela nje ambalwa ukusuka kusayithi kokuqubuka kokuqala okubikiwe eWuhan, eChina. Ababhali baphinde bakuchitha ukukhathazeka ngokushintshwa kofuzo kumagciwane ahlobene ne-SARS wadala ngososayensi be-WIV ngokubambisana nelabhorethri yase-University of North Carolina bekungaba ngumthombo weSARS-CoV-2.
Kuze kube manje, ososayensi be-WIV neziphathimandla zikahulumeni waseChina unganikanga ososayensi abazimele ukufinyelela kwe Imininingwane ye-WIV wama-bat coronaviruses.
Ngofebhuwari 11, 2020 imeyili, U-Liu umeme uSaif ukuba abe ngumbhali ngokubambisana kohlaka “oluphelele” lwe- “commentary mayelana nomsuka ongaba khona we-2019-nCoV noma i-SARSCoV-2 ukuze aphikisane namahemuhemu athile.” U-Liu uthe nge-imeyili ukuthi ubhale ukuphawula kanye noSu ngesimemo somhleli omkhulu we Ama-Microbes Asakhulayo Nezifo.
USaif uvumile ukujoyina, esishoyo: "Ngihlele le nguqulo ngafaka negama lami njengoba nami ngizizwa ngigxeka lokhu."
USaif ngokwehlukana ubesayinele i- isitatimende eshicilelwe ku I-Lancet lawo ma-imeyili akhombisa ukuthi ahlelwa uPeter Daszak we-EcoHealth Alliance. I-EcoHealth Alliance iyiqembu elingenzi nzuzo elinayo ithole izigidi zamaRandi of Umkhokhi wentela wase-US uxhaso ukuze ukuguqula izakhi zofuzo amagciwane, kufaka phakathi nososayensi e Isikhungo se-Wuhan se-Virology.
NgoFebhuwari 12, 2020, uLiu naye ukumenywa USolwazi Weiss naye abe ngumbhali ngokubambisana, wavuma ngokushesha.
Liu ithunyelwe lo mbhalo kusihlwa ngoFebhuwari 12, futhi kungakapheli amahora ayi-12, ihhovisi lokuhlela eliseShanghai yamukelwe leli phepha, omunye obukeza ontanga ephawula: “Lokhu kuphawula okufika ngesikhathi. Ibhalwe kahle… Ngiphakamisa ukuthi ngiyishicilele zisuka nje. ”
Ngo-February 2020, EMI ushicilele okunye ukuphawula okumbili, konke obekuvumelana nesimo sikahulumeni waseChina ngemvelaphi yeSARS-CoV-2:
a Feb 4 ukuhlaziya enesihloko esithi “i-HIV-1 ayizange ifake isandla ku-2019-nCoV genome” yososayensi base-China baseMelika abanobudlelwano namanyuvesi aseChina; futhi
a Feb 28 ukuhlaziya enesihloko esithi “Ngabe iSARS-CoV-2 iqhamuke elabhorethri? Ukuphikisana nesimangalo sokwakheka ngokusebenzisa ukucubungula kabusha kwelebhu, ”ososayensi abazinze eShanghai abangaphansi kweChina Academy of Sciences.
Impikiswano yomsuka iyaqhubeka
Ochwepheshe ababhale i- EMI ukuphawula akubonanga ukuthi izindlu ze-WIV akushicilelwe Ama-bat coronaviruses ahlobene no-SARS, abengasebenza njengethempulethi yomsuka webhu we-SARS-CoV-2, ngokusho kwabanye ososayensi. Kuze kube manje, impikiswano ngendaba yemvelaphi yaleli gciwane isekhona evulekile, futhi kukhona growing izingcingo ukuphenya izimo zemvelo kanye neze-lab-Origin.
USolwazi waseStanford uDavid Relman wabhala kwi I-PNAS isihloko esithi izimpikiswano eziphikisana nezimo zobunjiniyela ngamabomu “zehluleka ukwamukela ukuthi kungenzeka ukuthi okhokho ababili noma ngaphezulu abangakadalulwa (okungukuthi, okhokho ababedlula abanye kuneRaTG13 neRmYN02) base betholakele futhi babefundwa elabhorethri — ngokwesibonelo, eyodwa ne Umgogodla we-SARS-CoV-2 kanye ne-spike protein receptor-binding domain, kanti enye enesiza se-SARS-CoV-2 polybasic furin cleavage. Bekungaba yisinyathelo esilandelayo esizwakalayo ukuzibuza ngezakhi zegciwane elihlanganisayo bese ulidala elabhorethri. ”
Ama-imeyili kaProfesa Linda Saif waseOhio State University, atholakala lapha nge-US Right to Know ngokufaka isicelo samarekhodi womphakathi: Iqoqo lama-imeyili eSaif # 1: I-Ohio State University (Amakhasi we-303)
Ama-Biohazards, IBiohazards Blog I-Covid-19, ukuphepha kwelebhu, imvelaphi ye-coronavirus, Impikiswano ivela kwaSARS-CoV-2
Mashi 2, 2021